Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်)
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Methotrexate သည် ခန္ဓါကိုယ်မှဆဲလ်များ အထူးသဖြင့် အလျင်အမြန်ပွားတတ်သော ကင်ဆာဆဲလ်များ၊ ချဉ်ဆီဆဲလ်များနှင့် အရေပြားဆဲလ်များ၏ ကြီးထွားမှုကို အနှောက်အယှက် ပေးနိုင်ပါသည်။
Methotrexate ကို ရင်သား၊ အရေပြား၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ချောင်း သို့မဟုတ် အဆုတ်တို့တွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာရောဂါတစ်ချို့အားကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ပြင်းထန်သော Psoriasis နှင့် သွေးလေးဖက်နာတို့အား ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။
များသောအားဖြင့် တခြားဆေးများပေးလို့မှ လက္ခဏာများမသက်သာလျှင် Methotrexate ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Methotrexate ကို သင့်အားညွှန်ထားသည့်အတိုင်း အတိအကျသုံးစွဲရပါမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ၊ ရက်အပိုင်းအခြားထက် ပို၍ဖြစ်သော လျော့၍ဖြစ်စေ မသုံးစွဲရပါ။
သင့်အခြေအနေနှင့်ကိုက်သည့် Methotrexate ပမာဏကိုသာ သင်သုံးရပါမည်။ Methotrexate ကို တစ်ခါတစ်ရံ နေ့စဉ်သောက်ရသည်မျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ပတ်မှ ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ်သောက်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ သင့်ကိုညွှန်ကြားထားသမျှ လိုက်နာပါ။ Methotrexate ကို နေ့စဉ်မှားသောက်မိ၍ သေသွားသူများ ရှိပါသည်။ သင့်အတွက် ပမာဏ၊ အချိန်အပိုင်းအခြားတို့အား သိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို မေးမြန်းပါ။
Methotrexate မှ အာနိသင်ကောင်းကောင်းရစေရန် မှန်မှန်သောက်ရပါမည်။ ဆေးမပြတ်ခင် ကြိုတင်ဝယ်ထားပါ။
Methotrexate သည် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး သွေးခဲခြင်းကို အကူအညီပေးသည့် သွေးဆဲလ်များကို နည်းပါးစေနိုင်၏။ မကြာခဏ စစ်ဆေးမှုများလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး အသည်းအသားစ နမူနာယူရန်လည်း လိုနိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များပေါ်အခြေခံ၍ ကင်ဆာကုသမှု နှောင့်နှေးမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Methotrexate ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Methotrexate ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Methotrexate ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Methotrexate အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရလျှင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်ဝန်ယူရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေရစဉ်၌ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးကိုသာ သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
တခြားဆေးများကို သောက်နေရလျှင်။ ထိုဆေးများတွင် ဆရာဝန်အညွှန်းမပါပဲ ဝယ်ယူနိုင်သည့်ဆေးများ ဥပမာ အပင်ထွက်ဆေးများနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးများ စသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
Methotrexate တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
သွားကိစ္စအပါအဝင် ခွဲစိတ်မှုများလုပ်ရမည်ဆိုပါက Methotrexate သောက်နေကြောင်း ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
မလိုလားအပ်ပဲ နေရောင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းများကို ရှောင်ပါ။ အကာအကွယ်ဖြစ်စေမည့် အဝတ်အစားများ၊ နေကာမျက်မှန်၊ နေရောင်ခံလိမ်းဆေးတို့ကို သုံးပါ။
Methotrexate သည် အရေပြားကို နေရောင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အထိမခံဖြစ်စေတတ်သည်။ Psoriasis ရှိ၍ Methotrexate သုံးနေရပါက နေရောင်နှင့်အနာထိတွေ့မိလျှင် ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါသည်။
Methotrexate သုံးနေစဉ် ဆရာဝန်ကို အသိမပေးပဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် X ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါပြင်းထန်ဓါတ်မတည့် လက္ခဏာများဖြစ်လာပါက အရေးပေါ်ကုသမှုများ ခံယူရပါမည် – အကွက်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊ လည်ချောင်း)၊ ခေါင်းတအားမူးခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်း။
အောက်ပါ ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာပါက Methotrexate ကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြသပါ။
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ပါးစပ် နှုတ်ခမ်းတို့တွင် အဖြူကွက်များပေါက်ခြင်း။
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ တုပ်ကွေးလက္ခဏာများ
လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူ အရေပြားတွင် အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ ကွာကျခြင်း၊ နီခြင်း
အရေပြားဖျော့ခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ငွေ့ငွေ့ဖျားခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင်ြ့ခင်း၊ ရွံ့ရောင်ဝမ်းများသွားခြင်း၊ အသားဝါခြင်း (မျက်လုံးဝါခြင်း)
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Methotrexate သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
Methotrexate နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးကုန်များမှာ
An antibiotic or sulfa drugs
Isotretinoin, retinol, tretinoin
NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) – ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam, and others
Salicylates – aspirin, Nuprin Backache Caplet, Kaopectate, KneeRelief, Pamprin Cramp Formula, Pepto-Bismol, Tricosal, Trilisate, and others
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Methotrexate က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Methotrexate သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
ပိုးဝင်ခြင်း (ဘက်တီးရီးယား၊ မှို၊ ဗိုင်းရပ်စ်)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Acute Lymphoblastic Leukemia အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
Induction: 3.3 mg/m2/day သောက်ဆေး သို့မဟုတ် အသားဆေး (prednisone 60 mg/m2 နှင့်တွဲ၍)
ထိန်းညှိပမာဏ (during remission): 15 mg/m2 အသားဆေးကို သို့မဟုတ် သောက်ဆေး တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်။
Alternate remission dosing: 2.5 mg/kg အကြောဆေးကို ၁၄ ရက်ခြားတိုင်း တစ်ခါ။
Choriocarcinoma အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
15 to 30 mg အသားဆေး သို့မဟုတ် သောက်ဆေးကို ၅ ရက်နေ့စဉ်သောက်ရန်။ ကြားထဲတွင် ၁ ပတ်နှင့်အထက်နားပြီးနောက် အဆိပ်သင့်လာသည့်လက္ခဏာမပေါ်မကျင်း ၃ ခေါက်မှ ၅ ခေါက်ထိ ပြန်ကျော့ရမည်။
Trophoblastic Disease အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
Lymphoma အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
Burkitt’s tumor အဆင့် ၁နှင့်၂ – 10 to 25 mg ကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ၄-၈ ရက်သောက်ရန်။
Malignant lymphoma အဆင့် ၃ – : 0.625 to 2.5 mg/kg ကို ကင်ဆာဓါတုကုထုံး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့် နေ့စဉ်သောက်ရန်။
အဆင့်အားလုံး၏ကုသမှုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ခါနှင့်တစ်ခါကြား ၇-၁၀ ရက်ခန့် အနားပေးရ၏။
Meningeal Leukemia အတွက်ပုံမှန်ပမာဏ
12 mg/m2 ကို ခါးရိုးထိုးဆေးအဖြစ် CSF ဆဲလ်များပုံမှန်အရေအတွက် ပြန်ရောက်သည့်တိုင် ၂-၅ ရက်ကြာအောင် ပေးရပါမည်။ ဤတွင် တစ်ကြိမ်တိုးပေးဖို့ အကြံပြုပါသည်။ ၁ ပတ်အောက်သာအနားပေးခြင်းက ဆေး၏ အလတ်စားအဆိပ်သင့်မှုကို ခံရနိုင်သည်။
2.5 to 10 mg ကို သောက်ဆေးနေ့စဉ် သို့မဟုတ် 50 mg အသားဆေးကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 25 mg ကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ပေးရန်။
Osteosarcoma အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
ကနဦးပမာဏ – 12 g/m2 နှုန်းနှင့် ၄ နာရီကြာအောင် (တခြားသော ဓါတုကုထုံးဆေးများနှင့် တွဲလျက်)အကြောဆေးသွင်းရမည်။ ဆေးသွင်းပြီးနောက် သွေးတွင်းပြင်းအားမှာ 1000 micromolar အထိမရောက်ခဲ့လျှင် ဆေးပမာဏကို 15 g/m2 နှုန်းအထိ တိုးနိုင်ပါသည်။
ကုသမှုများကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက် 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 29, 30, 44, နှင့် 45 ပတ်မြောက်များတွင် ပေးရမည်။
တစ်ကြိမ်တည်းပမာဏ – တစ်ပတ်လျှင် 10-25 mg နှုန်းကို သောက်ဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး၊ အသားဆေး၊ အကြောဆေး စသဖြင့် လိုအပ်သည့် တုံ့ပြန်မှုရောက်သည်အထိ ပေးရမည်။
ခွဲဝေရသောပမာဏ – 2.5 mg ကို သောက်ဆေး၊ အသားဆေး၊ အကြောဆေး စသဖြင့် ၁၂ နာရီခြားတိုင်း တစ်ကြိမ်ကျကို သုံးကြိမ်ပေးရမည်။ ထိုသို့နှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာပေးရပါမည်။
တစ်ကြိမ်တည်းပမာဏ – 7.5 mg ကို အပတ်စဉ် သောက်ရပါမည်။
ခွဲဝေရသောပမာဏ – 2.5 mg ကို ၁၂ နာရီခြားတိုင်း တစ်ကြိမ်ကျကို သုံးကြိမ်ပေးရမည်။ ထိုသို့နှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာပေးရပါမည်။
တစ်ပတ်လျှင်အများဆုံးပမာဏ – 20 mg
Neoplastic Diseases အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး – 30-40 mg/m2/week to 100-12,000 mg/m2 အထိ အနည်းအများ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ leucovorin ဖြေဆေးပါ တွဲရနိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Acute Lymphocytic Leukemia အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
100 mg/m2 ကို ၁ နာရီကြာအောင်ပေးပြီး 900 mg/m2/day နှုန်းရအောင် နောက် ၃၅ နာရီကြာ အကြောဆေးချိတ်ထားရမည်။
15 to 20 mg/m2 နှုန်းနှင့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
Meningeal Leukemia အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
အသက် ၄ လအောက် – တစ်ကြိမ်ကို3mg ခါးရိုးဆေးထိုးရန်။
၄ လနှင့်အထက် (၁ နှစ်အောက်) – တစ်ကြိမ်ကို6mg ခါးရိုးဆေးထိုးရန်။
၁ နှစ်နှင့်အထက် (၂ နှစ်အောက်) – တစ်ကြိမ်ကို 8 mg ခါးရိုးဆေးထိုးရန်။
၂ နှစ်နှင့်အထက် (၃ နှစ်အောက်) – တစ်ကြိမ်ကို 10 mg ခါးရိုးဆေးထိုးရန်။
၃ နှစ်နှင့်အထက် – တစ်ကြိမ်ကို 12 mg ခါးရိုးဆေးထိုးရန်။
CSF ဆဲလ်အရေအတွက် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သည်အထိ ဆေးကို ၂-၅ ရက်ခြားတိုင်း ပေးရမည်။ ထို့နောက်တွင် ၂ ပတ်တိတိ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နှုန်းပေးပြီး နောက်ပိုင်း၌ လစဉ်ပေးရပါသည်။
ဆေးနားရက်ကို ၁ ပတ်အောက်နည်းပေးပါက အလတ်စားအဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
7.5 to 30 mg/m2 ကို အသားဆေး သို့မဟုတ် သောက်ဆေးအဖြစ် ၂ ပတ်ခြားတိုင်းပေးရမည်။
အစားထိုးပမာဏ – 10 to 18,000 mg/m2 IV bolus သို့မဟုတ် ၆-၄၂ နာရီကြာအောင် တောက်လျှောက် ဆေးသွင်းနေခြင်း။
5 to 15 mg/m2 ကို အသားဆေး သို့မဟုတ် သောက်ဆေး တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ပေးရမည်။
Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis အတွက် အရေပြားအောက်ထိုးဆေး – 10 mg/m2 ကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထိုးပါ။
Solid Tumors များအတွက်ပုံမှန်ပမာဏ
အသက် ၁၂ နှစ်အောက် – 12000 mg/m2 အကြောဆေး
၁၂ နှစ်နှင့်အထက် – 8000 mg/m2 အကြောဆေး
အများဆုံးပမာဏ – 18 grams.
Methotrexate (မီသိုထရီစိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Methotrexate ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Solution, Injection: 25 mg/mL
Methotrexate ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန် 2, 2019
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, အလှအပ
Keratolytic Action အကြောင်း